XOG: Qaar kamid ah raggii saraakiisha ku laayey gobolka Galgaduud oo gacanta lagu dhigay & beelohooda. | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Qaar kamid ah raggii saraakiisha ku laayey gobolka Galgaduud oo gacanta...
XOG: Qaar kamid ah raggii saraakiisha ku laayey gobolka Galgaduud oo gacanta lagu dhigay & beelohooda.
Xoghoose oo warbaahintu heshay ayaa sheegaysa in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah dableydii laayay Saraakiishii ka tirsana Ciidanka Xoogga ee maalmo ka hor lagu laayay inta u dhexeysa Magaalada Guriceel iyo Degmada Balamballe ee isla Gobolkaasi Galgaduud.
Laamaha ammaanka maamulka Galmudug iyo ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen shan ruux oo ka mid ah malayshiyaadkii ka dambeeyey weerarkaasi, waxaana wararku intaas ku darayan in mid ka mid ah dableyda lahaayo uu dhaawac yahay.
Raggaan katirsanaa malayshiyaadka weerarka geyste ee gacanta lagu dhigay oo la sheegay inay ku jiraan ciidamo katirsanaa kuwa dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka soo kala jeedaan beelo degan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa guddiga baaritaan u saaray dhacdada lagu laayay lix Sarkaal oo ka tirsanaa Ciidanka Xoogga oo malleyshiyadkaasi hubeysan ay waddada u galeen, xilli ay ka bixitimen Magaalada Guriceel, ayna kusii jeedeen degmada Balamballe.
Previous articleItoobiya oo gargaar u direysa caasimadda Tigray
Next articleMaxkamadda Sare ee Mareykanka oo diiday dacwad uu soo gudbiyay gobolka Texas